Iziphepho Ezintathu Zesigaba 4 Zishaya Ulwandlekazi iPacific ngasikhathi sinye | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kungokokuqala selokhu kunamarekhodi wesimo sezulu ukuthi izivunguvungu ezintathu ifakwe ilebula njengomdlalo wesigaba 4 futhi iyakhiwa endaweni efanayo.
Ulwandlekazi iPacific uzibonele ukuthi kwenzeka kanjani isimanga esingaka esingakaze senzeke noma kuphi emhlabeni futhi lapho kuhlangana khona iziphepho ezintathu enkulu.
Ngenxa yezithombe ezinikezayo isathelayithi yeNASA, ungabona ukungqubuzana kwe- iziphepho ezintathu zeSigaba 4 oLwandlekazi iPacific. Iziphepho ziqanjwe ngegama UKilo, u-Ignacio noJimena futhi baklelana maphakathi nePacific. Ngokusho kwalezi zithombe, iSiphepho iKilo sisempumalanga yolwandle futhi sidala imimoya efinyelela u-200 km / h. ISiphepho Ignacio sikhona maphakathi nendawo, ikakhulukazi mayelana Amakhilomitha angama-600 ukusuka eHawaii. Kulokhu, imimoya yesiphepho ifinyelela kumakhilomitha angama-220 ngehora.
Isiphepho uJimena itholakala entshonalanga yePacific kanti nemimoya yayo ifinyelela ku-200 km / h. Ngokwezibikezelo eziningi, uJimena uzongena eHawaii kuleli sonto, abangele izimvula ezinamandla nomoya ovunguzayo ngempela kuyo yonke le ndawo.
Lesi simo esingakaze sibonwe nesingokomlando senzeka lapho oLwandle i-Atlantic Okunye futhi okwenzekayo kudonsela ukunaka kongoti. Isiphepho uFred kuzoba yisiphepho sokuqala ukudlula Iziqhingi zaseCape Verde, indawo yase-Afrika lapho kuvame ukuba khona izivunguvungu zasezindaweni ezishisayo bese zifinyelela emandleni esishingishane lapho zihlasela eziqhingini zaseCaribbean.
Lolu chungechunge lwe Izimo zezulu ngokusho kochwepheshe abaningi, bangumphumela ocacile walesi senzakalo ngu-El Niño lokho kuhlupha iNingizimu Melika, ngenxa yokushisa okweqile okutholwe ngamanzi alezo zindawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Iziphepho ezintathu zeSigaba 4 zishaye iPacific Ocean ngasikhathi sinye